उच्च बनाउने फोटो फ्रेम | ROYI ART गैलरी
खाली सब्लीमेसन MDF फोटो फ्रेम
बेस्पोके आर्टवर्क वा फ्रेममा डिजाइनहरू
विवाह, जन्मदिन, वर्षगाँठ र अन्य विशेष अवसरहरूको लागि उत्तम संग्रह!
सी निजीकृत शिल्प द्वारा तपाइँको आफ्नै कला reate
हामी तपाईंको विशेष आवश्यकताको अनुरूप MDF फ्रेम डिजाइन गर्न र काट्न bespoke सेवा प्रदान गर्दछौं। खालि MDF फ्रेमहरूका लागि अनुकूलित आकार र आकार उपलब्ध छन्, यस बाहेक, हामी यूवी गर्न सक्दछौं वा उच्च चित्रण तातो तपाईंको तस्विरहरू सीधा स्थानान्तरण गर्न! ROYI ART निजीकृत शिल्प द्वारा तपाइँको आफ्नै कला सिर्जना गर्न तपाइँलाई समर्थन!
पत्र फ्रेम: अनुकूलित पत्रहरू प्रेम, परिवार, सनशाइन, मित्र, बधाई हो र यस्तै हुन सक्छ! तपाईं अगाडि आकार, शैली र फ्रेम आकार तय गर्न सक्नुहुन्छ। अनुकूलित डिजाइन द्वारा तपाईंको शुभकामना व्यक्त गर्नुहोस्!
टाउकोमा ढाँचाको साथ फ्रेम: तपाईं कुन फ्रेमन पैटर्नको निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरू सूर्य, चन्द्रमा, फूल, जनावर वा तपाईंको दिमागमा जे पनि हुन सक्छन्! तपाईंको आफ्नै आत्माले चित्रको लागि उपयुक्त ढाँचा डिजाइन गर्नुहोस्!
फ्रेममा ढाँचा: यदि तपाई फ्रेमको टाउकोमा परिष्कृत डिजाइन बिना सरल शैली चाहानुहुन्छ भने किन अनुकूलित ढाँचालाई फ्रेममा सिधा बनाउनु भएन, हामीलाई तपाईले चाहानुहुन्छ कि फ्रेम कस्तो देखिन्छ र हामी तपाईलाई यसलाई परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछौं। वास्तविकता मा!
कार्टुन फ्रेम: बच्चाहरूलाई तिनीहरूको अविस्मरणीय बचपन बचाउन मद्दत गर्ने यो उत्तम तरिका हो! यो एक प्यारा तरीका हो कि तपाइँको बच्चाहरू कसरी क्रमशः हुर्कन र यो प्राथमिक विद्यार्थीहरू बीच लोकप्रिय छ! प्यारा तरीकाले प्यारा कार्टून फ्रेम रेकर्ड कथाहरू! तपाईले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि कुन कार्टुन चरित्र बच्चाको साथ चरण-बृद्धि हुदै जान्छ!
हामीसँग तपाईंको प्रोजेक्ट सुरू गर्नुहोस्
हामी उच्च गुणस्तरको नमी प्रतिरोधी एमडीएफ र सीएनसी लेजर काटि technology टेक्नोलोजी प्रयोग गरी खाली MDF फोटो फ्रेम डिजाइन र निर्माण गर्दछौं। विनियोजित तातो प्रेस तापमान मध्यम दबावबाट -०-80० सेकेन्डमा १~० ~ २०० is हुन्छ। हाम्रो MDF फ्रेमहरूको फाइदा पानी प्रतिरोधी हो र जीवन-लामो समयसम्म राख्न सक्षम गर्दछ।
हामीसँग कसरी सुरु गर्ने? पहिलो चरण हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाईंको दिमागमा के छ हामीलाई भन्नुहोस् र त्यसपछि हामी यसलाई वास्तविक कला बनाउनेछौं!
हामीलाई सम्पर्क गरेर तपाईंको आफ्नै चित्रहरू निजीकृत उपहारको रूपमा प्रिन्ट गर्नुहोस्!
हस्तनिर्मित तेल चित्रकारी , तेल चित्रकारी , एब्स्ट्र्याक्ट तेल चित्रकारी , स्ट्रेचर बारहरू , समकालीन तेल चित्रकारी , तेल क्यानभास मा चित्रकारी , सबै उत्पादहरू